Kedu igwe igwe dị mma maka oge oyi? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Oge ezumike oyi - olee otu ị si ekpebi
Oge ezumike oyi - olee otu ị si ekpebi
Kedu igwe igwe dị mma maka oge oyi?
Ọ bụrụ n ’ibi n’otu akụkụ ụwa nwere oge anọ kwesịrị ekwesị, oge opupu ihe ubi, ọkọchị, udu mmiri na udu mmiri, ị maraworị na oge kachasị sie ike nke afọ ịnya ịnyịnya bụ ugbu a n’oge oyi, dabere n’otú ị si ele ya anya nọrọ. dabara ma buru asọmpi ahụ, mana maka nke ahụ, ị ​​ga-achọ ụfọdụ ihe nzuzo nke ọrụ ahụ ka anyị nọrọ ebe a taa ka ịdebe igwe kwụ otu ebe gị n'ihi na ihu igwe oyi nwere ike ibibi igwe kwụ otu ebe ma ọ bụrụ na ị kpacharaghị anya na-enweghị ịwụli n'ihu ụzọ 10 iji debe gị igwe kwụ otu ebe na-agba ọsọ Na-edebe igwe kwụ otu ebe gị n'oge oyi a, ọ dị mma nke mbụ ihe mbụ, ị nụrụ ya tupu oge eruo, mana ịkwesịrị iji mesie ike, obosara dị obosara n'ihi na ugbu a, igwe kwụ otu ebe ka mma karịa n'ihi na roba dị na ala nwere nnukwu kọntaktị Mpaghara ụdị na ala ọ ga - enye aka na traction ọ ga - enyere aka belata ndakpọ na ịchọghị ị nweta taya dara ada n'etiti oge oyi tụkwasa m nwayọ nwayọ ọ ga en ị na nke a ga - adị mma n'ihi na na oyi na-atụ okpomọkụ na ọsụsọ na ifufe na-aga site na gị, ị chọghị ịbụ ezigbo ọsọ ọsọ mgbe ị na-echeta Ted King na mụ na-aga njem ịnyịnya ibu mara mma n'afọ gara aga na ụfọdụ ihe anyị abụọ kwuru Ihe anyị nwere ike ikwu ozugbo bụ na ịnya n'oké ọhịa na ji nwayọọ nwayọọ na-agba ndị nnukwu fatbikes anyị nwere ike na-ahụ anyị okpomọkụ dị mfe ma na-ekpo ọkụ, ya mere, otu ihe banyere taya ma ọ bụrụ na live na-ebi ụfọdụ n'ezie ọhịa ihu igwe ọnọdụ dị ka ugwu akụkụ nke Europe Oralaska ma ọ bụ ihe dị ka, ị ga-ahụ ọtụtụ nke snow na ice, cheta inweta ụzọ taya abụọ ejiri nwee cassette siri ike maka ịgbago usoro na etiti oge ọkọchị ihe dị mfe bụ ihe ọdịnala na-emebi emebi maka oge oyi na-eche ụzọ mmiri mmiri nnu mmiri bụ ụkpụrụ gị ma ọ bụrụ na ị na-anya ọma na gravel ọ bụrụ na ị bụ unyi na aja na jazz niile ị nwetara, ọ ga-agwụcha agbụ gị, kaseti gị, wiil gị, taya gị, ọ ga-emebi ihe ụbọchị, ụbọchị ọ bụla. Ọ ga-ebibi mbibi. na gị mmiri otú ọ ga-abụ ab le ime ihe kariri Inwe ihe nwere ogologo ndu bu ihe m choro, ugbua i gha griiz ihe obula na nkpu isi oge oyi Bottom bracket Seat post Thru-axles Pedal body even the little screws niile ga-enweta nnukwu unyi na nnu na mmiri n’elu ha ma ọ ga-akpọ nkụ gị ihe ọ ga - ewepụta tọn site na nsị na nsogbu ndị ọzọ yabụ debe ihe gị mmanụ nke ọma iji zere ịrapara, ikekwe kposara kredị ma ọ bụ ka njọ. Ee, ihe na - agbagha mgbe ị na - apụ.
All fenders Anyị niile anụwo banyere ndị fenders ma ọ bụ fenders, dị ka m nwere ha ebe a na m Pinnarello, ma ha dị oké mkpa na Winter ha ga-abụ gị na gị N'ezie, idebe ndị ị na-agba ịnyịnya na n'efu, nke ahụ ga-abịa were gị Taya gbanyụọ, mana ha ga-enyekwara gị aka idobe igwe kwụ otu ebe site na idobe apịtị na mkpụmkpụ nke ụgbọala na okpokoro gị. Ọ bụrụ na ị na-ekiri ka ị na-agba ịnyịnya ígwè na mmiri mmiri, ị ga-ahụ na ihe ọ bụla nke na-abịa n'okporo ụzọ na-aga nke ọma na mpempe akwụkwọ gị ma ọ dị ka mmiri na-agagharị n'akụkụ na-asọba n'ime nkwado gị, dị ka nke ahụ oge niile ị ụgbọala. Yabụ ọ bụrụ na ị nwere ezigbo mudguards ị nwere ike idebe mmiri ahụ oge niile na ebe dịka ihe nkwado ala a na-eche na ọ dị ka osimiri na-apụ ebe a mana ị ga-aga ala ihe niile na-esite na taya na-aga na fenda ahụ ma ọ dakwasị ala nke mere na enweghị m ike ije ije nke ọma etu mudguards siri dị mkpa maka ịkwọ ụgbọ mmiri n'oge oyi, aga m agarịrị ịsị na ha dị mkpa na nke ahụ pụtara ịnweta ọkụ ole na ole na-atụkwasị obi snow mgbe ìhè na-apụ ngwa ngwa n'oge oyi, inwe ezigbo ọkụ dị ezigbo mkpa ugbu a amaara m na ọ bụ ntakịrị isiokwu gbasara etu ị ga-esi mee ka igwe kwụ otu ebe gị nwee isi mana ị gaghị enwe ike ịme njem ọ bụla, ọ bụrụ na ị banye na mmadụ n'okporo ámá gbara ọchịchịrị ma ọ bụ nke ka njọ, mmadụ ga-agba ọsọ n'ime gị, yabụ ezigbo ọkụ n'oge oyi dị ezigbo mkpa.
Otu ihe m na-eme bụ itinye ihe nhicha m n'ihu ọnụ ụzọ ụgbọala m na ngwongwo sooks mgbe m laghachiri maka njem m, jiri eriri ahụ mee ya ọzọ, gbachapụ ihe niile ruru unyi na nsị, wee m wepụ ihe dị ka nke a Muckoff Cleaner na m na-agba ọsọ ọsọ na igwe kwụ otu ebe ka m wee mechaa site na ihichapụ ihe niile ka ọ kpoo mmanụ a dryụ ka ọ dị njikere maka ụbọchị na-esote, echekwara m na ọ dị mkpa iji mesie ya ike na ị gaghị eji nlezianya hichaa wiilị ahụ mgbe ọ bụla ị na-agba n'oge oyi ugbu a, ọ bụrụ na ịge ntị n'akụkụ mbụ nke isiokwu a ebe m kwuru na ị na-eji ihe dị arọ karị, ọ bụ ya mere m ji chee na ọ bụ ihe dị mkpa bụ ka igwe ahụ dị ọcha ma rụọ ọrụ na ezi larịị, ma mgbe ahụ, ma eleghị anya, otu ugboro n'izu m ga-asị na-eme a miri emi nke ọma dị ọcha na a ezigbo onye n Degreasing nke niile mmiri na ihe ndị yiri nke ahụ na igwe kwụ otu ebe ga-arụ ọrụ niile oyi, otú a bike kwesịrị ya nọmba ụbọchị ndị a. Jide n'aka na igwe kwụ otu ebe gị kpọrọ nkụ nke ọma tupu ị tụfuo ya n'ime ụlọ gị ma ọ bụ ebe ndọba ụgbọala ma ọ bụ jiri ikuku na-agbapụ ya, ma ọ bụ jiri ụfọdụ Muck Off Bike Chebe ya iji kpochapụ mmiri ma ọ bụrụ na ị ga-eji igwe kwụ otu ebe maka mmadụ ole na ole Inwe were awa n'ime ụlọ iji jide n'aka na ọ kpachapụrụ nke ọma na-eme ihe dị iche ma a bịa n'ịdị ogologo ndụ nke ngwa gị yana igwe gị niile. Ugbu a, ka anyị kwuo maka brekị, ọ bụrụ na ị na-eji brakịlị caliper ọdịnala mgbe ahụ ihu igwe oyi ma ọ bụ ihu igwe ihu igwe ga-enye aka, ha ga-emepụta ọnọdụ ka mma na nke ahụ ga-abụ nkwanye m maka oge oyi iji kpochapụ eriri ndị ahụ ma ọ bụ jiri a kaa akara usoro na mmiri n'ezie mmiri na á »‹ dá »‹ ka m kwuru? Gbaa mbọ kpochapụ igwe kwụ otu ebe gị mgbe ị sachara ya.
Ọ dịghị ihe dị njọ karịa ịchekwa igwe kwụ otu ebe na oyi ma wee pụta mgbe ịsachara ya iji chọpụta na eriri ndị ahụ ajụla oyi ugbu a ebe ọ bụrụ na ị na-eji igwe kwụ otu ebe na diski diski, nke ụfọdụ n'ime gị igwe eletriki hydraulic agaghị nwere nsogbu ndị a na dochie eriri na ihe ndị yiri ya agaghị eme na otu a maka ịgbanwere kọmputa, mana maka ndị na-eji diski breeki ị kwesịrị itinye ego na mpempe akwụkwọ sintered na ngwakọta dị iche ga-enyere aka megide ájá mmiri na ọnọdụ siri ike ị ga-ahụkarị. oyi na-akwọ ụgbọala A na-eji ya tụnyere ihe ndị dị ndụ, nke na-adịkarị nro ma dị mma karị na ihu igwe dị ọkụ. Ya mere maa jiri mpempe sintered gaa ma ọ bụrụ na ị na-eji diski brek. Ihe ọzọ ị ga-eme mgbe ị na-agba ịnyịnya ígwè gị bụ ịdọrọ cranks ugbu a ma ọ bụrụ na ị nụ ọtụtụ mkpọtụ na mpaghara nkwado ala, nke ahụ nwere ike ịpụta ọtụtụ gravel na ájá wuru ebe ahụ.
Nke a na-alaghachi azụ mgbe m kwuru okwu banyere iji fenders na igwe kwụ otu ebe gị, ọ bụrụ na ị naghị eji fenders mgbe ahụ ị nwere mmiri ahụ a na-asọ asọ na ájá na ájá na-aga n'aka nri mgbodo na ebe crank, na-eme mkpọtụ na mkparị na-adịghị mma nwere ike ịnụ ọgba aghara banyere igwe kwụ otu ebe n'oge oyi, yabụ ọzọ ana m akwado ịzụrụ ezigbo mudguards nke na-egbochi mmiri ahụ ịbanye na triangle dị ala nke etiti ahụ na nkwado ala na ihe niile a na-eme kwa izu mgbe ị na-eme nke a nhicha. nke igwe kwụ otu ebe, M ga-atụ aro ka ị wepụ cranks n'oge a. Anyị nwere ọtụtụ akwụkwọ akụkọ teknụzụ na nke a na ntanetị ọgbara ọhụụ wee lelee ihe ndị a, yabụ nnukwu isiokwu ọzọ m hụrụ n'anya maka ịgba ịnyịnya oyi na-enweta nnukwu ọkụ ọkụ carbon fiber na-agba ịnyịnya igwe gị maka oge oyi ma ọ bụ tụlee ijikọ oge oyi. igwe kwụ otu ebe ma na-ahapụ igwe kwụ otu ebe n'okporo ụzọ dị ka ọ dị site n'iji ihe dị ka wiilị aluminom nwere taya buru ibu na akụrụngwa dị arọ, nke siri ike karị, na Setbrake Pads - ihe ndị a niile ga-eme igwe igwe dị arọ, mana ọ ga-abụkwa igwe kwụ otu ebe dị nnọọ mma megide ọnọdụ obi ọjọọ n'oge oyi, yabụ ndị a bụ ụfọdụ ndụmọdụ maka etu esi elekọta igwe kwụ otu ebe gị n'oge nkeji oge kwa ụbọchị iji sachaa igwe kwụ otu ebe, kpoo igwe kwụ otu ebe mgbe ijiri ya mee, na ịhụ ihe igwe gị kwesịrị iji. gaa n'ihu na-agagharị na-enweghị nkwupụta na ya ga - enyere gị aka ịnọgide na - aga n'oge oge oyi n'oge n, yabụ ndụmọdụ ndị a ga - azọpụta gị oge na ego na - eme gị nchekwa mgbe ị na - apụ n'oge oyi, mee ka anyị mara na nkwupụta ma ọ bụrụ na anyị Agbaghara ihe, ma ọ bụrụ na ther e bu nkenke ihe edeputara? Think chere na ị na-aga n'ihu n'oge oyi, yabụ hapụ nke ahụ maka anyị na ngalaba ndị dị n'okpuru ebe a, gbaa mbọ hụ na ị ga-eji ejiji na-ekpo ọkụ n'èzí ma kelee gị maka ikiri
Oge ịnyịnya oyi ọ na-adị njọ maka igwe kwụ otu ebe gị?
Oge oyiọnọdụ ihu igwe nwere ike ịbụtara akpụ gị igwe kwụ otu ebe, ma ọ bụrụ na ị kwadebe nke ọma ị ka nwere ike ịnabata ihe niileoyi ịnyanwere na-enye.Oge oyinwere ike na-akpali akpali, ma apịtị, ice na mmezi irighiri ihe naiheokporo ụzọ nwere ike ịgba ọsọiheyi uwe na akwaigwe kwụ otu ebe gịakụrụngwa.Dec. 8 2020
Nabata ndị mara mma. Echere m mgbe niile na ịnyagharị n'oge oyi ga-eme ka ị sie ike, ọ ga-eme ka ị sie ike karị, ahụike gị ga-agafe n'elu ụlọ. Enwere m ihe ọmụma.
Anọ m ọdụ n'akụkụ ọkụ na-agbawa wee chee na ọ dị njọ, m ga-arụ ọrụ ụlọ na ya wee gwa gị ihe niile banyere ya na ihe kpatara ọ ji dị mma. (egwu dị elu), ee, ọ ga-eme ka ị sie ike karị. Mgbe ị nọ ebe ahụ na-etu ọnụ maka pals gị na ihe kpatara ị ji agba ịnyịnya na ọnọdụ ndị a jọgburu onwe ya, ka ha nọ ọdụ n'ihe ndina ya ma wụchaa ọnwa ọzụzụ niile ahụ, n'ezie na-eme ka ị sie ike ma a bịa n'ihe gbasara ịkwọ ụgbọala na ihu igwe oyi, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ bụ oge opupu ihe ubi ma ọ bụrụ na ọ bụ a bit chilly na a bit mmiri ozuzo ị ga-abụ ihe ọma na ya na ndị enyi gị niile ga-ama jijiji na ha niile na-agba ịnyịnya gia.
Ọ ga-eme ka isi ike gị karịa. (upbeat rock music) (ịsụ ude site na oyi na-atụ) de ji obi ike na-erekwu calorie mgbe ọ dị oyi ọ bụ eziokwu. Ọ dị mma, emeela m nnyocha na ya, mgbe ọnọdụ okpomọkụ na-adalata nke metabolism gị na-arị elu ka ị wee kpoo ọkụ ma gị onwe gị karịa calorie na-ere ọkụ, mana ọmụmụ na-atụ aro na calorie ndị oyi na-ere na-asachapụ mgbe ha kpoo ọkụ ma na-egosipụta ahụ.
O yikarịrị ka ọ ga-abụ eziokwu ma ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ ma ọ bụ na-eme ọzụzụ ahụ zuru oke, mana mmetụta a na-ekpo ọkụ n'oge oyi a adịchaghị apụta n'okporo ụzọ mepere emepe ebe ekpughere ahụ gị. Ọ dị mma nke ahụ dị omimi nke ukwuu, mana emeela m nyocha karịa na nke a ma anyị ga-egwu ala n'ime nke a. (Swiping) Ya mere, ị ga-abụ obere ihe nju oyi, nke na-ewetara anyị na ego ọzọ, Non-Shevering Thermogenesis, NST.
Tremors dị egwu ma ọ dịghị onye chọrọ ime ya mgbe ha na-agba ịnyịnya Naanị ịdị jụụ na-akpata NST, nke ọ bụghị naanị na-eme ka calorie gị na-arụ ọrụ na igwe kwụ otu ebe, kamakwa na-eme ka abụba gị na-arụ ọrụ nke ọma ọ bụrụgodi na ị naghị agba ịnyịnya. (obi ụtọ rock music) nke na-eme ngwa ngwa weta m na nke a na-esote ma nke ahụ na - erepụ gị ee, comi na - enwe oke ọ excitedụ n'ihi na ịchọrọ ịgbatị oge ọnwa ndị a jọgburu onwe ya ma ọ dị mfe Iji gbaa onwe gị ọkụ n'oge opupu ihe ubi a. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ime ka mgbatị ahụ dị elu n’oge ọnwa oyi a, gbasaa ya.
mips igwe kwụ otu ebe
Chọghị ịpụ na ịnya ịnyịnya oge niile, afọ niile. Can't nweghị ike ime nke ahụ. Ọ bụ okwu a ma ama na kandụl ahụ na-ere ọkụ na nsọtụ abụọ, ị ga-agbapụ onwe gị.
Mgbe oge opupu ihe ubi, otuto ga-ejupụta gị, ahụ gị na-adị oke ma ị nwere ọnwa ọkọchị n'ọnụ ụzọ, na-akụ aka n'ọnụ ụzọ gị, ọ dị mma. (egwu a na-akụ n'okirikiri) will ga-enwe obere ọrịa, ee nke ahụ bụ eziokwu, ekwenyere m na ya n'ihi na ọfụma ị bụ, obere oge ị ga-anọ na akwa ịnwụ. Nnyocha egosila na ndị na-emega ahụ oge niile na-arịa ọrịa ihe dịka ọkara dịka ndị ibe ha hụrụ n'anya n'ihe ndina.
Ee, nke ahụ bụ eziokwu. Nweta isi ike ahụike maka ịga na ịga site na ime ime, nke nje jupụtara na oge a nke afọ. (Joy rock music) otutu uzo di otutu.
Ee, n’oge udu mmiri ndị mmadụ agaghị enwe obi ike ihu igwe na-atụ egwu ịga ije. You'll ga-ahụ onwe gị na gbasara naanị gị onwe gị, na-enyocha ihe na-eju anya na ọkọchị. Nweta ihe niile maka onwe gị na ị nwere ihe niile maka gị. Mgbe a na-abịaru ọnwa oyi, ị ga-amalite ịbụ eze ma ọ bụ eze nwanyị n'obere. ụdị uwe dị iche iche, kama ịtinye nnukwu jaket na uwe ogologo ọkpa, ị ga-amalite kpoo ahụ ọkụ, ị na-ewepụ jaket gị, ihe niile ị nwere n'okpuru bụ uwe elu nwere ogologo ọkpa na baselayer.
Mgbe ahụ, ọ na-aga na oyi oyi gị, nke na-enweghị mmiri. Nwere uwe ogologo ọkpa gị, mmiri na-adịghị, ị nwere akpụkpọ ụkwụ dị mma. Ọ bụrụ na akpụkpọ ụkwụ gị anaghị enwe ezigbo mmiri, mgbe ahụ sọks na-enweghị mmiri ma ọ bụ sọks na-ekpo ọkụ ga-eme ka obere ụkwụ ndị ahụ dị mma ma dịkwa oke amamihe.
Ihe na-esote bụ uwe ịgba ọsọ. Ugbu a, enwere m akwa oyi akwa a, nke dị ezigbo ọkụ. Enwere m uwe ogologo ịnyịnya ogologo ebe a.
Ọ ga-eme ka obi sie gị ike, mgbe ahụkwa akwa ọzọ bụ jaket. Ugbu a, nke a bụ shei dị ka ndị dị otú a, ọ bụ windshell, mana ọ na-enweghị mmiri, ikuku, mmiri niile. Ga-abụ onye isi na nhazi.
Ihe dị anyị mkpa ugbu a, otu uwe aka abụọ, okpu agha na ị dịla njikere maka okwute ma tụgharịa na ọnwa oge oyi. (obi ụtọ rock music) Obere ego maka gị ma ọ bụrụ na ị pụọ ma n’oge ọnwa oyi, ị ga-eyi ọtụtụ uwe karịa ee ee igwe kwụ otu ebe ga-adị arọ nke ukwuu. Mgbe ị na-ebu igwe kwụ otu ebe gị, ị na-ewulite ume na ike ahụ ike mgbe ị na-agba ịnyịnya ígwè gị.
Lee, igwe kwụ otu ebe m kwụ ọtọ ma enweghị m osisi n'ihi na apịtị jidere ya. (upbeat rock music) Ya mere, lee ndụmọdụ ole na ole banyere ihe mere ị ga - eji pụọ ụbọchị wintry mgbe apịtị na mmiri - ị ka na - eme ihe ọ bụla, ị na - anọrọ ndị enyi gị niile nwere nsogbu ndị a niile. ụkwara ma nwee oyi. Banye igwe kwụ otu ebe gị, nwee anụ ahụ n’apịtị n’ihi na ọ bụ ihe egwuregwu.
Olileanya ndụmọdụ ole na ole a enyerela gị aka ichefukwala ịdenye aha na ụwa n'ihi na ị na-efu ụfọdụ nnukwu ihe ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnọgide na-ele GMBN pịa ebe ahụ maka edemede ọnwa oyi site na oge ikpeazụ nwere ike inyere gị aka. Echefula inye anyị mkpịsị aka ukwu ma ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya ihichapụ apịtị na anyị ga-ahụ gị oge ọzọ, anyị ga-ahụ gị.
Enwere m ike ịgba ịnyịnya igwe n'okporo ụzọ m n'oge oyi?
Oge oyi nwere iken'ezie ịbụ ihe ọ bụla: gị ochieokporo ụzọ, okpoko osisi okirikiriigwe kwụ otu ebe, ma ọ bụ ọbụna ugwuigwe kwụ otu ebe. Gịnwere ikejiri carbon-fiber mee iheigwe kwụ otu ebe, n'ezie, ma ndị a na-adị oke ọnụ ma ị nwere ike ọ gaghị achọ ị nweta ha niile apịtị na ujo.
Ndị igwe kwụ otu ebe dị ọnụ ala karịa n'oge oyi?
O doro anya na ị nwere ohere dị elu nke inweta nkwekọrịta ka mmaoyi, kamakwa nhoputa abughi oke. Karịsịa n'ebe nwere oge a kara aka, enwere ọtụtụ mmadụ nwereọnụ ala anyịnya igwendị chọrọ ego na ụfọdụ ebe keoyima deputa haanyịnya igwemana meghee mkparita uka.
Na taa achọrọ m ikwu maka ihe kpatara mmadụ enweghị ike ịnya ọgba tum tum m n'obodo ahụ ọnwa ole na ole n'oge oyi n'oge oyi ruo mgbe mmiri ga-abịa zụta ịnyịnya nhọrọ kachasị mma n'oge a ụdị 2011 ugbu a ị nọ ma ọ dịkarịa ala na ụzọ anya nnukwu nhọrọ nke agba nnukwu nhọrọ nke ụdị ugbu a na anyị na-eche na anyị nọ n'oge opupu ihe ubi anyị nwere ọnụ ọgụgụ dị egwu nke igwe kwụ otu ebe maka ire ere Springerfar na ole na ole n'etiti mgbe ụfọdụ ma anyị enweghị ọgba tum tum na ọgba tum tum ugbu a abụghị ndị ahịa kachasị mma n'oge a ndị mmadụ na-ekwu ihe Horsewell oge ochie bụ, Abụ m onye ọgba tum tum Korea, ọ bụ onye na-emepụta ngwaahịa, ị chere ihe ha ga-ere, kwenye na ọcha, rie ụcha na mgbe ụfọdụ ha naanị mee ya? “Tinye ya na ntu ahụ n’isi ma ha nwere ụfọdụ ngwaahịa fọdụrụ na karama na-esote na 2011 nke anyị rere na igwe kwụ otu ebe na ha na-enye ndị nyere onyinye ihe siri ike iji zụta stomers ndị a, mana ọ bụ naanị mgbe ha lachara ka ha nọ agabigala ọtụtụ anyị anyịnya igwe bụ ugbu a na ala nwere ntaramahụhụ ma ọ bụ nwelata irè price atọ na puku anọ dollar na nke ahụ bụ a nnukwu mma Ndị a anyịnya igwe bụ nanị dị ole na ole ọnụ ọgụgụ ka ihe mere ịzụta onye mmeri dị nnọọ mfe ọ dị ma ọ bụrụ na ị na-eche gị ma nwee nnukwu ego na akpa gị Anyị na-enye ohere nchekwa n'efu maka igwe kwụ otu ebe a Anyị na-enye ego dị ịtụnanya ma ndị na-emepụta ihe na-ejigharịkwa ego ndị ahụ na ya Finankwụ ụgwọ na-eme ka ịzụta dị mfe ma na-eme ka ọmụrụ nwa ogologo oge dị ala karịa nke ha nwere ike bụ oge kacha mma iji zụọ ahịa n'ụlọ akwụkwọ anyị. Anyị niile nwere ndị mmeri ndị na-ere ahịa gị ere ma ọ bụrụ na ị nabata ha. N'ụzọ ahụ, anyị nwere ike inye gị ego karịa, anyị nwere oge karịa iji hichaa igwe kwụ otu ebe, mee ihe ngosi dị mma ma wepụta ya nye ọtụtụ mmadụ n'ime ọnwa ole na ole sochirinụ ma ọ ga-arụ ọrụ ka mma maka azụmaahịa gị na uru Russell na-enye Eziokwu ahụ bụ na oge oyi bụ oge kachasị mma maka ọgba tum tum onwe ya na oge kachasị mma maka ndị na-azụ ahịa ịzụta nke anyị.
Ọ ga - enweta ọnụahịa ka mma Ọ ga - enweta nhọrọ ahụ Ọ gaghị echere maka njem mbụ ya na mmiri Mgbapu na - abịa ịkwụsị ọtụtụ ndị na - emepụta ihe na ndị na - emepụta ihe na - ebelata ugbu a ma ha na - eji iwu n'ike. Ebe ahụ. Ha na-echekwa ahịa ọgba tum tum US nke ukwuu, yabụ ndị na-emepụta ya agbapụlarị ebuka n'ihi ya ị chọrọ ọgba tum tum mgbe ị nyere iwu maka mbubreyo oge opupu ihe ubi n'oge opupu ihe ubi, ị ga-eche oge. Fọdụ n'ime ndị na-eme nyocha anyị na-ewuzi iwu ahụ yana nke ahụ pụtara na igwe kwụ otu ebe ga-enwe mkpesa nke ọnwa ise, ọ bụrụ na etinyela mbadamba a na mbido oge ahụ, ị ​​ga-ebute ụzọ na mpempe akwụkwọ iwu na mbido igwe na obodo ga-amalite. na-echere gị nybọchị mbụ anwụ na-acha, nke mbụ mbụ na-agba ịnyịnya, ezigbo ihe kpatara eji zụta ọgba tum tum, nhọrọ ọnụahịa dị mma, uru, isi ahịa, ọnụego ọmụrụ nwa na nnweta yana ọnọdụ izu ike dị jụụ. bụrụ na ọ nwere ike ibute ihe ị na-echeghị n'echiche ka anyị gbaa gị ume, bịarute hụ anyị Anyị na-anọrọ naanị gị n'oge oyi, ị nwere ụfọdụ ezigbo ụkpụrụ ebe a Lelee ihe dịnụ zọpụta onwe gị ụfọdụ ego ma were onwe gị ọgba tum tum maka oge opupu ihe ubi oge nkwọcha
Kedu mgbe ị kwesịrị iji igwe kwụ otu ebe n'oge oyi?
Omenala ma ọ bụrụ na ị gbasoo usoro ọzụzụ ịgba ịnyịnya ígwè,oyiA na-eji ọnwa maka iwulite ntachi obi site na ogologo oge, nwayọ nwayọ. Nke a pụtara itinye oge dị ukwuu na sadulu, yabụoyi igwe kwụ otu ebena-enwe geometry dị jụụ karị - nke a na-ahụkarị na ọ na-aga ma ọ bụ na-atachi obianyịnya igwe.
Ọ bara uru ịnweta igwe kwụ otu ebe n'oge oyi?
N'ime oge oyi ole na ole, ego ị na-eyi na-eyi nke kachasị mmaigwe kwụ otu ebega-agbakwunye ma tinye ego ahụ naoyi igwe kwụ otu ebenke ọmakwesịrịya. Na aoyi igwe kwụ otu ebeị ga na-agba ịnyịnya ọbụla ọnọdụ ihu igwe na nke ahụ ga-abụ ezigbo ihe.
Ekwesịrị m ịgba ịnyịnya ígwè n'oge oyi?
Enwere m ike ịgba ịnyịnya ígwè na ihu igwe oyi?
Oge oyi nwere ikesiri ike naanyịnya igwe, ọ bụ ezie. (Jide n'aka na ị ga-anwale nrụgide taya na mgbụsị akwụkwọ, yabụ na ị naghị agbanwe ụlọ dị n'etitioyi.) Ọzọkwa, gbalịa na-agba ọsọ ndị widest taya na ị na-nwere ikedabara na gịigwe kwụ otu ebe. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ntakịrị traction na ọnọdụ oyi, tụlee itinye ego na taya taya abụọ.Ọkt 30 2020
Egwuregwu kacha mma maka oge oyi na-aga: Top 10 Bikes na Enyi na Enyi. 1 1. Diamondback Doo anya STI-8. 2 2. Novara Ponderosa Mountain Bike. 3 3. Yeti 575 x 01 Igwe kwụ otu ebe. 4 4. Trek Farley. 5 5. Surly Pugsley. Ihe ndị ọzọ
Kedu ụdị igwe kwụ otu ebe bụ igwe kwụ otu ebe n'oge oyi?
Oge oyi nwere ike ịbụ ihe ọ bụla: ụzọ ochie gị, ịnyịnya ígwè, ma ọ bụ ọbụna igwe kwụ otu ebe. Ọtụtụ ndị na-arapara n’okporo ígwè ochie ha mgbe ha nwetara nke ọhụrụ ma gbanwee ya ka ọ bụrụ igwe kwụ otu ebe n’oge oyi. N'oge oyi, igwe kwụ otu ebe na-egosipụta igwe, karịa carbon-fiber, ebe ọtụtụ mmadụ ka ji igwe na-aaringụ iyi.
You chọrọ igwe kwụ otu ebe iji na-aga ọrụ?
O yikarịrị ka ị gaghị etinye aka na-agagharị na-arụ ọrụ site na igwe kwụ otu ebe na ọnọdụ ihu igwe niile ma ọ bụrụ na ọ bụ ọrụ dị na mbụ, ya mere, anyị ejirila ntuziaka a mara mma nyere gị aka ịme nhọrọ ziri ezi. Kedu igwe igwe kachasị mma maka njem?